Welcome to Phoe Phyu & Associates | Phoe Phyu & Associates
We are the best law firm in Land Disputes & Business Issues
Talk to us! We promise we can help you! Call Now! +95 (9) 960 278 100
Legal Service For Land
Legal Advocacy for Land
Legal Research for Land
Legal Consultancy for Land
Legal Service for SMEs
Looking for professional legal services?
ဖိုးဖြူနှင့် ရောင်းရင်းများလီမိတက်သည် မတရားမှုများကြောင့် မြေယာများနစ်နာဆုံးရှုံး နေသည့် ပြည်သူများ၊ မိမိတို့လုပ်ငန်းအတွက် ဥပဒေဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုများ လိုအပ်နေသော အသေးစားနှင့် အလတ်စား စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များအတွက် အကောင်းဆုံးသော ဥပဒေအကျိုးဆောင်မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးနေသည့် ဥပဒေအတိုင်ပင်ခံ လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။
U Phoe Phyu
LL.M in International Trade & Commercial Law
Latest Analysis on Current Issue
၂၀၁၈ခုနှစ်၊ ဇွန်လ၊ ဇူလိုင်လများအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပြည်နယ်များရှိ မြို့များတွင် ရေဘေးဒဏ် ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။ မြို့နယ်များမှာ ပဲခူး၊ ဘီလင်း၊ ဘားအံနှင့် မော်လမြိုင်မြို့များရှိ ပြည်သူဦးရေ တစ်သိန်းနှစ်သောင်းခန့် ရေဘေးဒဏ် ခံစားခဲ့ကြရပါသည်။
ဓါတ်လိုက်သေဆုံးသူ ကျောင်းသားလေးကိစ္စ The Silent Talks နှင့် အင်တာဗျူး
ဓာတ်ကြိုးကို တက်နင်းမိကာ ၁၃နှစ် အရွယ် မောင်မျိုးမင်းထွန်း သေဆုံးခဲ့မှု သက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနကို တရားစွဲဆိုသွားမည်ဟု တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေဦးဖိုးဖြူပြောကြား ဆိုသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် The Silent Talks မှ အင်တာဗျူး အစီအစဉ် ..
တောင်ဥက္ကလာမြို့နယ်ရှိ ကျောင်းသား လူငယ်တစ်ဦး ဓါတ်လိုက် သေဆုံးရခြင်း ကိစ္စ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်တွင် နေထိုင်သည့် မောင်မျိုးမင်းထွန်း(ခ)ပေါက်စို့သည် ကျောင်းမှ နေထိုင်ရာအိမ်သို့ အပြန်လမ်းတွင် ဓါတ်လိုက်သေဆုံးခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။
ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ ကုန်သွယ်မှုမှာရော၊ ဒေသတွင်း ကုန်သွယ်မှုမှာရော၊ ပြည်တွင်းရောင်းဝယ် ဖောက်ကား ကိစ္စတွေမှာပါ လွတ်လွတ် လပ်လပ် ယှဉ်ပြိုင်ခွင့်ဆိုတာ ကုန်သည်တွေ အသည်းအသန် မက်မောနေကြရတဲ့ အခွင့်အရေးတစ်ခုပါ။
စီးပွားယှဉ်ပြိုင်ခြင်း ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဘယ်လဲ?
နိုင်ငံတစ်ခုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဆိုတာ အဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု အပေါ်မှာမူတည်နေတာ အားလုံးအသိပါပဲ။ စီးပွားရေးဆိုတာကလည်း ပိုင်ဆိုင်မှုသိပ်ပြင်းထန်လွန်းတဲ့နယ်မြေတစ်ခုမို့ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ချင်ရင် ဒီယှဉ်ပြိုင်မှုတွေကို ရင်ဆိုင်ရမှာ အသေချာပါပဲ။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းအတွက် ရှေ့နေက ဘာတွေလုပ်ပေးဖို့ လိုအပ်တာလဲ
စာချုပ်စာတမ်းတွေနဲ့ ကိုယ့်ပရောဂျက်ကို တရားဝင် ခိုင်မာအောင် လုပ်ပေးမယ့် Construction lawyer ဟာ ကိုယ့်ကိုဘယ်လိုကိစ္စတွေမှာ ဘာတွေကူညီမှာလဲ၊ သူတို့တွေကိုရော မရှိမဖြစ် လိုအပ်တာလား၊ သူတို့ကရော ဘာတွေလုပ်ပေးတာလဲ
Essential Elements of Good Construction Contracts & How to Write them
ခေတ်မှီ တိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ဆောက်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ ပညာရပ်တွေကလည်း အရှိန်အဟုန်ပြင်းပြင်းနဲ့ လိုက်ပါ ပြောင်းလဲနေတာ အမှန်ပါပဲ။ တိုးတက်မှုနဲ့အတူ ယှဉ်ပြိုင်မှုတွေလည်း ပြင်းထန်လာကြတဲ့အခါမှာ တရားဝင်ခိုင်မာမှုမရှိတဲ့ လုပ်ငန်းက ရပ်တည်နိုင်ဖို့ အလားအလာ အလွန်နည်းပါတယ်။
StartingaLaw Firm Out of Law School With No Money – A Complete Guide (2)
Law firm တစ်ခု စတင်ဖို့ ဆိုတာက မြင်သလောက် မလွယ်ပါဘူး ။ စီးပွားရေးတစ်ခု ပုံဖော် စတင်ခြင်း ဒါမှမဟုတ် စီးပွားရေး အကြံဉာဏ် စိုက်ထုတ်ခြင်းကိစ္စတွေမှာ ၊ ဖြစ်လာနိုင်မယ့် အခက်အခဲ တွေ ခြိမ်းခြောက်မှုတွေကနေ ရှောင်ကြဉ်နိုင်ဖို့ အတွက် အရေးကြီးလှတဲ့ ခွဲခြမ်း စိတ်ဖြာ အကြံဉာဏ်ပေးမှုတွေ လုပ်ပေးရတာ ဖြစ်တဲ့အတွက် တကယ် ခက်ခဲတဲ့ လုပ်ငန်း တစ်ခုပါ။